Job na-enye ndị na-ere ahịa ahịa na HADRON SA - TELES RELAY
Job Nye maka Ahịa Na HADRON SA
Cameroon - Enyemaka JobJob na-enye
HADRON SA bụ ụlọ ọrụ mmepe sọftụwia omenaala nke na-eji teknụzụ kachasị mma na nke kacha mma iji were ịma aka na ịma mma were aka imeri nsogbu injinịa ngwanrọ. HADRON SA na-enye usoro ngwanrọ ahaziri iche maka nsogbu nke ọha na eze na ndị otu nzuzo. Nhazi a na-ekwe nkwa ihe ịga nke ọma nke ọrụ anyị, n'ihi na anyị na-agbanwe software anyị na usoro nke ndị ahịa anyị.
Dị ka akụkụ nke mgbasawanye ya, HADRON SA na-eweghachi maka ụlọ ọrụ ya na Yaoundé:
Atọ (3) Commercial Interns
Uzo a choro
• Inwe ike ịtụ anya ma zute ndị ahịa ọhụrụ
• Na-eme mkparịta ụka banyere azụmahịa
• Zụlite ma jigide mmekọrịta azụmahịa
• Inwe ihe ọmụma banyere ụzọ na usoro ọgbara ọhụrụ ịre ere IT
• Nwere ikike kọmputa ma nwee ike ịrụ ọrụ na sọftụwia ahịa na atụmatụ azụmahịa
• Nwee ikike ige ntị, nzukọ na aka ike
• Nwere ikike maka imepụta ihe, ịmata ihe na ịdị omimi
• Inwe ike rụọ ọrụ n’onweghị gị
• Nwee ike na ntachi obi
• Gosipụta azụmaahịa azụmahịa
• Nwee asụsụ abụọ (French / Bekee)
Have nwere opekata mpe azụmaahịa BAC + 3 ma ọ bụ na azụmaahịa
• Inwe opekata mpe afọ ise nke ọrịre na ire nke IT na teknụzụ nkwukọrịta.
• Ezigbo ihe ọmụma banyere ngwá ọrụ IT, sọftụwia isi.
Ibu Ọrụ & Ozi:
Onye na-ahụ maka irere ahịa ga-akọrọ Onye Isi Ọganiihu Ndị Ahịa (DCS), onye ọ ga - akọ banyere ọrụ ya. Ihe nile aghaghi ime:
• Nyochaa nke mkpa ndị ahịa
• Nhazi nke nleta ndị ahịa maka akaụntụ ya niile. Onye na-ere ahịa ahụ (SO) na-enye njikọ dị n'etiti ụlọ ọrụ na onye ahịa.
• Ndenye ihe ngwọta nke ụwa niile dabara na mkpa ekwuputara
• Ijikwa na ibuga usoro dị ka usoro oge ọhụụ dị, ogo na ọnụ ahịa ya.
• ft na-ebuputa azụmahịa na nkwonkwo ya na ngalaba ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
• Mmepe nke pro - forma na akwụkwọ ọnụahịa na njedebe nke ọrụ a na mmekorita ya na ndị ọrụ ruru eru nke ụlọ ọrụ ahụ.
• Nzaghachi ndị nrụpụta nọ n'okpuru nlekọta nke DCS
• Nyochaa akwụkwọ ọnụahịa na ịnakọta ụgwọ na akaụntụ ya na mmekorita ya na ngalaba niile dị mkpa.
• Akụkọ banyere ọrụ ya na ngwaọrụ IT ndị dịnụ.
Nwa akwukwo obula nwere mmasi n’onodu a kwesiri iziga faili ha (leta CV + na mkpali) n’adres a: alphonse.mvele@hadron.tech
Ọrụ Job Maka Azụmaahịa Na HADRON SA
Villa tatasịrị oge iti Leicester wee ruo na League Cup ikpeazụ
Akwụkwọ akụkọ 18 pm nke Jenụwarị 28, 2020 - VIDEO